Magaciisa Waxa uu Ahaa Guuleed Wuuna Guuleystay | Xaqiiqonews
Magaciisa Waxa uu Ahaa Guuleed Wuuna Guuleystay
Sheekadani waxa ay ku saabsantahay wiilkan 17-jirka ah Soomaaliga ah ee Turkiga u joogo in uu ka gun gaaro riyadiis.
XAQIIQO NEWS- WAR IYO DHAMAANTIIS.
Warka: Guuleed Cabdi waxa uu ka soo muuqday muuqaal aad baraha bulshada ugu faafay, kaasi oo ku saabsan jaceylka uu guuleed u qaba in uu sameeyo boombalayaasha caruurta sida diyaaradaha iyo baabuurta, muuqaalka ayaa lagu daawaday boombalayaal uu guuleed sameeyey isaga oo adeegsanaya qabab bilow ah.
Dhamaadkiisa: Markii xirafadda Cabdi lagu baahiyey baraha bulshada, waxaa bilowday olole ay qey ka ahaayeen saraakiil Turki ah kaasi oo lagu dalbaday in Cabdi loo qaado Turkiga si uu ugu gun gaaro riyadiisa.
Wasiirka arimaha dibadda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaana kafaala qaaday duulimaadka Guuleed Cabdi iyo qoyskiisa, dhanka kale wasiir ku xigeenka arimaha dibadda ee Turkiga Yavuz Selim Kıran ayaa isna talaadadii la soo dhaafay Tuwiterkiisa ku soo qoray “waxa aan garab taaganahay Guuleed”.
Bayraktar -ka Soomaaliya
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa guuleed ugu naaneysay ” Bayraktar – ka Soomaaliya”, iyaga oo ka shidaal qaadanaya elçuk Bayraktar, oo ahaa wiil dhalinayarro Turkish ah, kaasi oo ah maskaxdii ka dambeeysay soo saarista Drones-ka Turkiga lagu sameeyey ee beryahan dambe aadka u soo caan baxay.
Sida uu qoray webseetka Daily Sabah ee Turkiga laga leeyahay Guuleed iyo
Bayraktar ayaa ku kulmay bandhig diyaaradeedka ” Teknofest ” kaasi oo ka dhacay gobolka koonfureed ee Gaziantep.
Bayraktar ayaa kulan isbarasho ah la qaatay wiilkan Soomaaliga ah, isaga oo u hadiyeeyay Moodalka diyaararad Drone ah oo ay sameysay shirkadda
Baykar oo ah shirkada maxali ah oo ay leeyihiin Bayraktar iyo qoyskiisa.
Cabdi waxa uu ahaa 13 jir markii uu soo bandhigay boombalihii ugu horeeyey ee uu sameeyey xilligaasi oo baraha bulshada Soomaaliya uu caan ka noqday.
“Waxaan u mahad celinayaa qof walbo oo qeyb ka qaatay in aan halkan imaado oo aan ka qeyb galo bandhigga Teknofest, waxaan dareemayaa in aan nasiib leeyahay ayuu yiri Cabdi oo wariyaasha la hadlay.
“Qalab badan oo waxyaabahani aan ku sameeyo waddankeyga kama helaayo ayuu yiri Cabdi pp warbaahinta u sheegay in uu mustaqbalka rajeenaayo in uu sameeyo shirkad sameysa diyaaradaha iyo Helikobtariska.